Kedu ihe dị iche iche nkesa GNU / Linux na ndị ọzọ? | Site na Linux
Kedu ihe na - eme ka nkesa GNU / Linux dị iche na ndị ọzọ?
GNU / Linux ụwa sara mbara ma mara nke ọma. Echiche nke desktọọpụ gburugburu, ngwugwu, na mgbọrọgwụ ndekọ maara ọtụtụ ndị ọrụ; N'ụzọ dị ịtụnanya, ihe ndị a abụghị naanị n'etiti otu nkesa na ọzọ.
Yabụ mgbe ọ bụla m gụrụ gbasara nkesa Linux nke kwere nkwa ịdị "iche", a na m ajụ onwe m:ihe na-eme ka ọ dị iche nke ndị ọzọ dị? N'okpuru ya paramita anyị nwere ike iche n'ezie otu GNU / Linux nkesa N’etiti ọtụtụ puku ihe ndị dị na mbara igwe na-enye anyị?
1 Nchịkọta na ndị njikwa ha
2 Ihe eji eme ihe
4 Mwepụta usoro
5 Ebumnuche niile
Nchịkọta na ndị njikwa ha
Ọ bụ ezie na otu mmemme ahụ ga-adị maka ọtụtụ puku nkesa, ngwugwu ọ na-etinye na nke ọ bụla n'ime ha nwere ike ịdị iche. Mgbe anyị na-ekwu maka ngwugwu anyị na-ezo aka na usoro ma ọ bụ ndọtị nke faịlụ ahụ, nke sistemụ arụmọrụ na-eji iji wụnye mmemme. Maka nkesa iji nwee ike iji faịlụ a, ọ ga-enwerịrị njikwa ngwugwu, nke nwere ngwaọrụ iji wụnye, gbanwee ma ọ bụ wepu mmemme ahụ. Nke a dị mkpa, n'ihi na agbanyeghị na mmemme ahụ agbanweghị n'etiti nkesa na ọzọ (ya bụ, Mozilla Firefox ga-anọgide Firefox na nkesa niile) o yikarịrị ka ọ bụrụ na ngwugwu ejiri wụnye ya gbanwere.
Formatsfọdụ ngwugwu formats bụ:
Deb: eji Debian na ndi ozo.
RPM: (Red Hat Package Manager) nke sitere na Red Hat ma jiri ọtụtụ ndị ọzọ mee ihe dịka Fedora, OpenSUSE, Mandriva, Mageia na ndị ọzọ.
PISI: site na Pardus.
MO: si na Slax.
PUP na PITA: Puppy Linux.
.txz: Ihe nzuzu
Fọdụ n'ime ndị ọrụ nchịkọta ngwugwu kachasị ewu ewu:
APT (ọnụ) na Synaptic (nke eserese): nke ndị Debian ji ya mee ihe.
Zypper (ọnụ) na YaST (nke eserese): onye njikwa OpenSUSE.
YUM: Fedora na Yellow Dog Linux.
dpkg - nke onye Debian mebere.
Urpmi: Mandriva na Mageia.
slapt-get, slackpkg, na swaret - “Ngwaọrụ” dị iche iche nke Slackware ji arụ ọrụ na ngwungwu tgz.
Ọ dị mkpa na m gbanwere njikwa ngwugwu n'etiti nkesa? Eeh. Eziokwu ahụ bụ na a na-ahọrọ onye njikwa maka mmebi nke ndị ọzọ na-egosi na achọrọ njikwa dị mma nke nchịkọta iji wụnye. Na nkenke, onye njikwa ngwugwu na-akọwapụta akụkụ buru ibu nke "isi" nke nkesa, ọ bụkwa nnukwu ihe ị ga-echebara iji mee ka ọ dị iche na ndị ọzọ. Agaghị m atụle nke dị mma, agbanyeghị na enwere ọtụtụ ihe atụ na ịntanetị nke ihe m kpọrọ "aptitude - zypper - yum war" nke ndị SUSE fans na-ekwu na Zypper ka kachasị mma.
Isi okwu ọzọ a na - emegharị ugboro ugboro bụ ogo ahụmịhe dị mkpa ka anyị jiri nkesa. Ọ na - eme ọtụtụ oge mgbe ị na - enye ndụmọdụ maka nkesa maka ndị ọhụụ, ma ọ bụ dịka anyị ga - eme na nkesa mbụ anyị, na anyị na - anụkarị “echeghị nro ịnwale Gentoo site na mbido” ma ọ bụ “Ubuntu bụ ezigbo nhọrọ ịmalite”.
Ihe isi ike nke iji nkesa na-eme atụmatụ na usoro:
ọnụ ọgụgụ nke ihe eserese ọ na-enye.
ole ọrụ a ga-arụrịrị maka njikwa (ebe enweghị ụzọ ọzọ maka ọrụ ahụ).
ihe isi ike nke echichi.
olu nhazi nke aghaghi ime mgbe etinyere nkesa.
ma ọ bụrụ na n'oge echichi ọ dị mkpa iji hazie nkebi disk ma ọ bụ nke a nwere ike ime na akpaghị aka.
Ọ bụ ya mere eji ejikarị kesaa ụfọdụ nkesa dịka ọkwa ọkachamara (Gentoo, Linux Site na Scratch, Slackware, Arch), nke a na-akwadoghị maka onye ọrụ "etiti-novice". N'oge na-adịbeghị anya, enwere ihe omume nke na-eme ka ihe nkesa Linux na-atụgharị iji nye sistemụ arụmọrụ na-atọ ụtọ ọ bụla maka onye ọrụ ọ bụla. N'agbanyeghị nke ahụ, ụfọdụ nkesa maka ndị mbido (Linux Mint, Ubuntu, Elementary OS, na ndị ọzọ) ka dị ịrịba ama.
Ọ bụghị otu n'ime ihe mbụ a na-ekwu mgbe a na-ekwu maka nkesa, mana ọ ka bụ ihe dị mkpa. N'ime ụwa nke na-anwa iwepụ "sistemụ nke na-achọwanye akụnụba" (Windows) ma ka na-echekwa ngwaike ọhụụ, enwere ngalaba nke nkesa nke na-enye ohere ịmegharị ngwaike (Puppy Linux, Slitaz, Tiny Core Linux , AUSTRUMI, Slax, Lubuntu, Xubuntu, Alcolix, Damn Small Linux, Molinux, wdg). Ọ bụ ezie na distros ndị ọzọ, dị ka Linux Mint ma ọ bụ Arch nwere ike itinye na kọmputa ochie, enwere oke nke mmiri nke sistemụ ahụ ga-efu, ya mere enwere nkesa pụrụ iche maka ụdị ngwaike ahụ. Ya mere, ọ bụ ihe ezi uche dị na ya na ụfọdụ nkesa ndị a na-enye nkwado maka ụdị 32-bit na 16-bit; ndị kasị ewu ewu na-enye nkwado 32 na 64 bit.
A nkesa dị ka Linux Puppy pụtara mgbe ahụ na ọ dịghị mkpa ka gị na ngwaike kachasị ike na ahịa ugbu a dị ugbu a, mana ọ na-arụ ọrụ zuru oke na kọmpụta nwere ihe dị mfe, ma ọ bụrụhaala na anyị etinyeghị mmemme na-achọ oke ego.
Ọ dị mfe: nkesa na-abịakarị n'usoro usoro nke na-akwụsị ịkọwapụta ihe bụ isi ya. Ọ bụ ezie na Live CD / DVD na-adịkarị n'etiti ndị na-ewu ewu, enwere ọtụtụ ndị ọzọ na-anaghị eji usoro a, na-ezere ịhapụ ụdị nsụgharị.
Ohere inwe CD, DVD, CD / DVD Live, gburugburu desktọọpụ dị iche na ndabara ma ọ bụ ikike ịwụnye na ,ntanetị, bụ ihe na-emetụta mkpebi nke ọtụtụ ndị ọrụ iji nwalee nkesa ma ọ bụ jiri ya na-adịgide adịgide. Anyị na-ahụkwa na e nwere tupu-ahapụ na-ekwe ka obodo nwalee nkesa tupu ọ na-agwụ agwụ.
Isi ihe ndị ọzọ dị mkpa gụnyere nsụgharị ndị ahụ maka ngwaọrụ ndị na-ebugharị na ndị ọzọ na-ekesa "Spin-Offs", ebe ihe atụ kachasị bụ nke Fedora, nke nwere nsụgharị maka Egwuregwu, Laboratory na Kere, ọ bụ ezie na nke a, n'echiche m , ọ bụ okwu nke ịwụnye nchịkọta ndị dị na nchekwa dị iche iche. N'ikpeazụ, echefughị ​​m nkesa "nkwekọ-ntọhapụ", nke ndị na-achọpụta ya doro anya Debian, Arch y OpenSUSE, na-enye gị ohere imelite ngwanrọ na sistemụ sistemụ na-enweghị mkpa ịme nrụnye ọhụụ ma ọ bụ ụjọ nke ịhapụ data nkeonwe.
Ihe nkesa ọ bụla bu n'uche ebumnuche nke ọ chọrọ iji ruo ndị ọrụ ya ugbu a ma ọ bụ ndị nwere ike iji ya. Site n'ebe ahụ, anyị nwere ike ịiche ndị akọwapụtara maka laptọọpụ (dịka JoliCloud nke agbakwunyere iji igwe ojii) na ndị maka sava (Red okpu Linux Enterprise bụ otu n'ime ihe siri ike na nkwado kachasị mma ugbu a).
Nkesa ndị ọzọ na-achọ nlekọta anya nke desktọọpụ na myirịta na sistemụ ndị ọzọ (yabụ na-enyere mgbanwe na ndị a aka), dịka ọ bụ maka Ube (ya na Mac dika odi nma), ZorinOS (nke GNOME na-agbanwe iji nye ebe yiri ya na ụdị Windows dị iche iche) na Ndabere (na set nke ihe oyiyi a wuru na ntinye oru na ndabara); Ndị a nwere ike ịnya isi na ha dị iche na gburugburu ụwa, mana enwere ike itinye ha na nkesa ndị a.
Nkesa ndị ahụ metụtara "ndị na-ege ntị kpọmkwem", dịka Linux sayensị, Musix, Otakux na ndị ọzọ na-agbakwunye naanị ngwa a kapịrị ọnụ, nke ọ dị ka ọ bụ ezughi oke iji gosipụta ya site na ndị otu ndị ọzọ, ebe enwere ike itinye ngwa na sistemụ ọ bụla ma ọ bụrụ na koodu isi ya dị.
Iji mee ka a mata, enwere ụfọdụ "oddities", dịka anyị na-ahụ na Globo Linux, nkesa dị iche iche na-ahazi mmemme arụnyere n'ụzọ dị iche na nkesa ndị ọzọ, nke mere na a na-ahụ faịlụ nke otu mmemme ahụ ọnụ. Omuma ndi ozo di, mana ha zoro ezo, ya mere na akwukwo ntaneti na ndabara anyi na ahu usoro ndia: Mmemme, Ndi oru, sistemu, faịlụ, ugwu, ebe a na-edebe ihe.
Ezi ihe omuma atu ozo bu Igelle, wuru site na ncha iji kwado ọnụọgụ kachasị nke ngwaọrụ ndị dị ugbu a. Ihe nkesa a nwere ebe desktọọpụ a na-akpọ Esther edere na GTK + na Webkit dị ka nsụgharị engine.
Na mmechi ihe edetu a, achoro m ime ka ihe puta ihe nke di m n'uche bu ihe kariri ihe di iche na nkesa a: ndi mmadu gbara gburugburu nkesa obula di nkpa maka oru nke a. Enweghị ụfọdụ ihe atụ ebe mkpebi obodo ma ọ bụ enweghị ihe ndị a setịpụrụ usoro (maka ihe ịga nke ọma ma ọ bụ ọdịda) nke mmepe nke nkesa, ọ bụkwa ebe ndị mmepe ga-elezikwu anya na nlebara anya. Enwekwara ikpe ebe onye ọrụ hapụrụ distro maka enweghị nsogbu ma ọ bụ obi abụọ ebe obodo ahụ amaghị etu esi aza ma ọ bụ nye enyemaka; Ọ bụ ya mere ọdịdị obodo, ọ bụ ezie na e bu pụta ụwa na sistemụ arụmọrụ dị ka nke a, na-aga n'ihu na-arụ ọrụ dị mkpa na ịkọwapụta otu nkesa karịa ndị ọzọ.
N'ikpeazụ, echefula ịgụ akụkụ “Nkesa”Nke a blog, nke nwere ezigbo ozi bara uru maka ndị bịara ọhụrụ.
Daalụ Juan Ortiz!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Faịlụ FileLet jiri » Kedu ihe na - eme ka nkesa GNU / Linux dị iche na ndị ọzọ?
Zuru oke! Amalitere m igwu egwu na Mageia 2 na enweghị m ike ịchọta njikwa njikwa ngwungwu, obere oge echere m na naanị drakerpm nwere ike iji (nke dị m ka ihe ijuanya na hehe) M ga-ahx ka esi etinye ngwungwu urpmi, daalụ!
Ee ọ bụ eziokwu. Nke dị oke mkpa.
Ana m akwado ka ị gụọ ngalaba Nkesa nke blog a. Offọdụ echiche ndị e gosipụtara n’isiokwu a ka emepụtara ntakịrị ntakịrị n’ime omimi n’ebe ahụ.
Ana m ahapụrụ gị njikọ ahụ: http://usemoslinux.blogspot.com/p/distros.html
Họrọ Bautista na Roca dijo
Ọnọdụ eserese abụghị ihe dị mkpa?
Zaghachi Víktor Bautista na Roca
onye ọzụzụ atụrụ dijo
Enwere m mmasị na otu ị si akọwapụta distro ahụ dịka ọrụ ha si dị… Karịsịa mgbe ị na-ekwu maka ngwakọ na ndị njikwa ngwugwu…. Ọ bụ ezie na m bụ onye debian na onye ọrụ kbuntu ... O juru m anya na zipa bụ ezigbo ngwaọrụ iji jikwaa nchịkọta ... N'ezie m ga-achọ ịnwale oghere na igwe m ... mana naanị m na-eji ya na sava m na-elekọta!
Kemgbe ọtụtụ afọ, Slackware ejirila usoro .txz kama .tgz nke, n'ụzọ, ọ bụghị otu ihe ahụ .tar.gz ma ọ bụ .tar.bz2 tarballs a na-eji, na-abụkarị maka isi iyi ...
Ezigbo mma 😉
APT (terminal) na Synaptic (graphic): nke "" Debian "jiri ya na ihe omuma ya.
Enwere ike iji sọftụwia n'efu maka ihe ọjọọ? (Edemede dị egwu, gbasara otu JSON si chọọ nnwere onwe gị egwu)
Olee otú iji tọghata .MTS Videos ka .AVI